Amandla e-Stirista Amandla ayo eSazisi esitsha kunye neDatha yeXesha leNene | Martech Zone
Abathengi bathenga kwivenkile ekwi-intanethi kwikhompyuter yakho, ndwendwela iphepha lemveliso kwenye indawo kwithebhulethi, sebenzisa i-smartphone ukuthumela malunga nayo kwimidiya yoluntu emva koko uphume uyokuthenga imveliso ehambelana nayo kwindawo ekufutshane yokuthenga.
Zonke ezi zinto zidibeneyo zinceda ukuphuhlisa iprofayili yomsebenzisi opheleleyo, kodwa zonke zizinto ezahlukeneyo zolwazi, ezibonisa ngokwahlukeneyo. Ngaphandle kokuba zidityanisiwe, zihlala ziziinguqu zakho ezahlukeneyo kwiidilesi ezibonakalayo, ii-ID zesixhobo, abathengisi bokwenyani behlabathi, iivenkile ezikwi-intanethi, amaphepha ewebhu omxholo, izixhobo eziziiselfowuni, iilaptops, iTV exhunyiwe, kunye neminye imilinganiselo onxibelelana ngayo.
Isinxibelelanisi esingapheliyo njengedilesi ye-imeyile- ihlala ikhawulezisa iinjongo zabucala- okanye isixhobo singadibanisa izilayi zedatha ezahlukileyo, senze igrafu yesazisi esidibeneyo emele umbono opheleleyo wendlu okanye umntu owenza abathengisi ukuba bajolise ngcono kwimikhankaso yabo efanelekileyo abaphulaphuli.
Ngaphandle kokuqokelela nokudibanisa yonke loo datha, owona mceli mngeni mkhulu kwigrafu yesazisi esiluncedo kukuyigcina ikhoyo ngoku. Xa abasebenzisi benxibelelana rhoqo ngalo lonke usuku, kulula ukuba idatha iphelelwe lixesha kwaye ingachaneki.
Kodwa ngoku umboneleli weenkonzo zokuthengisa oqhutywa yidatha u-Stirista uphakamise i-ante, kunye negrafu yokuqala yesazisi yokwenyani kwintengiso.
Ayisiyiyo iNdawo eNtofontofo
Ngelixa uninzi lweigrafu zesazisi zihlaziywa rhoqo kwiintsuku ezingama-30 okanye ezingama-90, i-OMNA yesazisi Igrafu- yavulwa ngu-Stirista ngo-Epreli-uhlaziya yonke imizuzwana.
Elo xesha lokwenyani lokuhlaziya idatha yesazisi somsebenzisi akusekho kubunewunewu, kodwa kunyanzelekile. Ukufaneleka komsebenzisi kungumsebenzi othe ngqo wokuchaneka kwedatha, kwaye eyona nto iphambili kukuchaneka kukutsha kwedatha.
Siyaqhubeka nokuva kubarhwebi abanxungupheleyo abathembise ukufikelela kwiidatha zobukrelekrele bexesha lokwenyani ukufumanisa ukuba uninzi lwezinto abazisebenzisayo ukuzibandakanya nabathengi kunye nethemba yinto endala, idatha engachanekanga. I-Stirista izisa kwintengiso ye-OMNA, igrafu yokuqala yesazisi yokwenene, ehlaziyiweyo iye kwesesibini kwaye inike iinkampani ulwazi olufunekayo ukuze baqonde ngcono amakhaya abo ekujoliswe kuwo-apho basebenza khona, bayichitha njani imali yabo, ziziphi izixhobo abazisebenzisayo, kunye iindawo abazindwendwelayo ngendlela ekhuselekileyo ehambelana nemfihlo.
UAjay Gupta, u-CEO weStirista
Okokuqala, idatha yomsebenzisi itshintsha ngokukhawuleza. Idilesi yesitalato, ubunini bezixhobo, idatha yokuthenga okanye olunye ulwazi lunceda ekuchazeni umntu okanye umzi ngeendlela ezihambelana nemfihlo. Khawufane ucinge ukuba mangaphi amaxesha ngosuku owenza ukhetho olutsha malunga nokujonga umxholo, ukubukela inkqubo, ukuthenga into, okanye ukutyelela kwindawo ethile kwilizwe lokwenyani.
Okwesibini, imeko eyiyo yokufikelela ebantwini okanye emakhaya ngemiyalezo efanelekileyo nayo iyatshintsha ngokukhawuleza. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ikuki yomntu wesithathu iyaphela, kwaye ukubanakho ukujolisa okanye ukubeka intengiso kwizixhobo eziphathwayo kuya kusiba nzima. Ukuthengisa okuthe ngqo kumabonwakude kuyehla, njengoko ababukeli beshenxela kweminye imithombo yomxholo.
Kwaye imithetho emitsha kunye nokwazisa malunga nobumfihlo babasebenzisi benze imvume yomsebenzisi kunye nokungaziwa njengeyona nto iphambili kuyo nayiphi na ingqokelela yedatha okanye ulawulo lwesazisi.
I-OMNA idibanisa iibhiliyoni zonxibelelwano ezenza malunga ne-500 yokuchonga kwiprofayili nganye. Ukuba abathengisi bafuna ukwehla phantsi kwe-ID yesazisi, banokufikelela kwiigrafu ezikhoyo: ngaphezulu kwe-90 yezigidi zemizi yase-US kwi-IP Igrafu, ngaphezulu kwesigidi esinye sezixhobo eziqhagamshelwe kwiGrafu yeDivayisi, kunye nedatha malunga neenjongo zendawo kunye nentshukumo eqhubekayo kuhlaziywa kwigrafu yendawo.
Njengoko uninzi lwabathengisi luqonda, idatha evela kwikuki yomntu wesithathu ibingachanekanga kwaphela, kwaye yahlula abantu kwiipateni zokukhangela kwidijithali okanye ekusebenzisaneni kweefowuni ezingakhange zibonise uluhlu lwabo lomdla.
Ngokwahlukileyo, idatha yeqela lokuqala kunye neyesibini ezenza isiseko kwiigrafu zesazisi ezinjenge-OMNA yeStirista zichongiwe kwaye zichanekile kakhulu. Njengokudityaniswa kwezinto ezahlukeneyo idatha, iigrafu ezinjalo zinika umfanekiso opheleleyo womntu okanye umdla wasekhaya kunye neenkcukacha zabantu.
Akumangalisi ke ngoko ukuba igrafu yesazisi ibe sisixhobo esiphambili sabathengisi kule ndawo intsha.
Inokwazisa ngeentengiso ezisiwe kwindlu ethile ngeTV exhunyiwe (CTVInkqubo yendalo yokusasaza, intambo, kunye nokuPhezulu (OTT) iinkonzo zokusasaza. Iimeko ze-CTV azinakho ukufikelela kwiicookies kwaye zinegadi ezibiyelwe ngodonga apho umdla wababukeli unokumiselwa ngokudibanisa uluhlu lweenkcukacha zesazisi kwigrafu yesazisi.
Igrafu yesazisi inokukhokela intengiso okanye eminye imiyalezo kwizixhobo eziselfowuni zamalungu osapho, okanye iintengiso kunye nomxholo ohanjiswe kubasebenzisi abangqinisisiweyo kwiiwebhusayithi zebrendi.
Ngeentlobo ezininzi zezixhobo kunye namaqonga afumanekayo kubathengi, enye yemicimbi emikhulu ejongene nabathengisi kukuhambisa imiyalezo efanelekileyo kuwo onke amajelo onxibelelwano-kodwa ukubeka imvamisa yabo kubabukeli bangaziva bebhombu. Ukongeza, kukho ingxaki yokubonisa impembelelo yomyalezo onikiweyo okanye iphulo ekuthengeni okokugqibela, ukuze kuvavanywe ukusebenza kwenkcitho yentengiso oyinikiweyo.
Eyona ndlela yokwenza oko kukuqonda umzi okanye umntu kwizixhobo zonke nakwilizwe lokwenyani, ngokusebenzisa igrafu yesazisi ebanzi nehlaziyiweyo. I-OMNA ivumela ii-brand kwi-board yabo yedatha yokuqala malunga nabathengi kunye neendwendwe zabo kwiiyure ezingaphantsi kwe-24, ukuthelekisa kunye nokuphucula iiprofayili kunye nedatha ye-OMNA ukuze uphawu lwazi ngakumbi ngesihlwele salo.
Njengobhubhani uhla, abathengisi ngoku bajongana nehlabathi elitsha nelikhulayo ledatha yabathengi. Iigrafu zesazisi ezinje I-OMNA zizixhobo eziyimfuneko ekujongeni ukujolisa kunye neemfuno zokunikezela zabathengisi kunye nokubaluleka kunye neemfuno zabucala zabathengi, ngesantya esibonisa isantya sobomi.
Cofa apha ngolwazi oluthe kratya kwi-OMNA
tags: ajay guptaIdatha yokuziphathaI-TV exhunyiwecctvIinkcukachaIdatha yabantuigrafu yesazisiumdlaigrafu yesazisingaphaya kwaphezuluidatha yokuthengainjongo yokuthengauqhelisoumdla wababukeli